Ndị na-azụta ụlọ nwere ike iji Bitcoin kwụọ ụgwọ ugbu a na Manhattan CoinWorldMap
Ndị na-azụ ụlọ nwere ike ugbu a na-akwụ ụgwọ na Bitcoin na Manhattan
Septemba 19, 2021 Bitcoin
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe onwunwe Magnum Real Estate Group na-anabata ugbu a Bitcoin (BTC) maka ezigbo ala na Manhattan. Ebumnuche bụ ịnakwere ịkwụ ụgwọ na nnukwu ego mebere maka ụlọ ahịa ala atọ, nke na-efu ihe dị ka nde $ 30 ugbu a. N'ọdịnihu, ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye akụrụngwa na ebe ndị ọzọ.
Magnum Real Estate Group na-anabata ịkwụ ụgwọ na Bitcoin
Dị ka South China Morning Post si kọọ, ndị na-azụ ahịa ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ ụlọ ahịa na Manhattan site na iji bitcoin, cryptocurrency kasị ukwuu n'ụwa. Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ndị na-azụ ahịa ga-enwe ike ịnweta ego ngwa ngwa na ha agaghị etinye ego ọzọ ebe ọ bụ na ewuworị ụlọ ahụ.
Ụlọ ahịa ndị a dị ugbu a na 383 First Avenue. Ha nwere oghere 9000 square ma mara dị ka CODA.
Ben Shaul, Onye Mmekọ nke Magnum dabeere na New York, kọwara na ha bụ otu n'ime ndị isi na ịkwụ ụgwọ Bitcoin na ezigbo ụlọ.
N'okwu a, o kwuru:
Anyị bụ ndị ọsụ ụzọ na azụmahịa Bitcoin, anyị na-ahụkwa ụzọ a ga-esi mechaa ọtụtụ azụmahịa ndị ọzọ site na iji blockchain.
Ọnụ na $ 48 kwa Bitcoin n'oge ederede, ihe onwunwe dị ugbu a na gburugburu 100 Bitcoin. Ndị a bụ ihe ole na ole nke ndị na-etinye ego na-achọ iji Bitcoin kwụọ ụgwọ, mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ.
N'oge gara aga, Bitcoin investors nwere ọtụtụ ndị ọzọ atumatu iji zụta ezigbo ala na ụlọ na ugwo na Bitcoin. Enwere weebụsaịtị dị iche iche ugbu a na-ere ezigbo ala na ndị nwere mmasị nwere ike ịkwụ ụgwọ site na iji ego dijitalụ kacha ukwuu n'ụwa.
Mba ụfọdụ na-ekwekwa ka ndị na-ejide BTC kwụọ ụgwọ maka ezigbo ala na Bitcoin. Ụfọdụ otu Facebook dị n'ịntanetị na-enyekwa ndị ọrụ ohere ịchọ ma kwụọ ụgwọ ụlọ na ụlọ na Bitcoin. Enwere mmasị dị ukwuu na ịzụrụ ụlọ na BTC. N'ọdịnihu, na mgbasawanye nke iwu doro anya na usoro iwu, ọtụtụ ndị na-etinye ego nwere ike ịnweta ụgwọ maka ihe onwunwe ha na BTC.
N'oge ederede a, Bitcoin na-ere ahịa na gburugburu $ 48 ma nwee uru ahịa nke $ 100 ijeri. N'ime ụbọchị 900 gara aga, Bitcoin agbagoro 7%, bụrụ otu n'ime akụ crypto kachasị na-arụ ọrụ n'etiti 6,5 kacha elu.
Kedu ihe kpatara Ethereum anaghị ebi ndụ ruo uru ọ dị ugbu a
Eziokwu ọhụrụ pụtara na akụkọ ọdịda nke UST
CKarma: ngwakọta nke egwuregwu na ịzụ ahịa